Gabrummaa jala buluutti tokkummaan diina caalanii bilisoomuun furmaata maa’ti – OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATA
Gabrummaa jala buluutti tokkummaan diina caalanii bilisoomuun furmaata maa’ti
Gabrummaa jala buluutti tokkummaan diina caalanii bilisoomuun furmaata maa’ti.
Addunyaa kanarratti sabni gabrummaaf uumame akka hin jirre eenyuu ni amana. Kanaaf nutis ilmaan Oromoo gabrummaaf miti kan uumamne.
Sabni Oromoo saba guddaa fi dachii qabeenya uumamaatiin badhaate qabudha. Diinotni Oromoo durii haga ammaatti wanti isaan Oromoo akka inni of baree mirga isaaf hin falmanneef shira adda addaa irratti dalaganiifis qabeenyuma isaa kana saamuuf.
Dur akka Oromoon hin baranne yoo barates akka inni dalaga hin arganne taasisanii of wallaalchisan. Galanni Qabsaahota sabboontota Oromoo hin badinii saba akka kanatti dhiibbaa alagaan of wallaalee ture eenyummaa isaa deebisanii dagaagsuun akka inni Oromoo ofiin jedhee qolee isaa olqabatee deemu taasisan. Yeroo shirri inni duraanii harkaa fashalu ammoo, Oromoo gandaa fi amantiin addaan qoqqoodanii qabeenyaa isaa saamuuf toftaa isaanii jijjiiranii as bahan. Innis qabsaahotuma Oromoo qaroo fi hubatoo ta’aniin ergamni isaanii daaraa buubbeen fuute tahe. Fakeenyaaf Waldaan Maccaa fi Tuulamaa ilmaan Oromoo amantii fi gandaan gargar fagaatanii turan walitti fiduun akka isaan maaddii tokko irraa nyaatanii tokkummaa isaanii cimsan taasisuun bu’uura kaa’e.
Yeroo ammaa kanas Oromoon akka aangoomee biyya isaa irratti abbaa hintaneef shirri diinnaan Oromoo irratti Xaxama jiru akkaan kan durii caalaa hammaatadha.
Qabsaahota fakkatanii akka Oromoon Mirga lafee fi lubbuu qabsaahota Ilmaan Isaatiin argate deebisanii dhabamsiisuuf munyuuqaa jiru. Shirri keessaa fi alaan keessattuu Qabsaahota Ilmaan Oromoo irratti deemaa jiru karoora diinaan qophaahee maallaqni doolarri hedduun itti dhangala’e ta’uu hubachuun barbaachisaadha. Sanas ta’ee kana ilmaan Oromoo keessattuu dhaloonni Qubee gabrummaatti xumura gochuuf irree tokkoon hidhatee ka’eera. Kana wanti duuba deebisu tokkollee akka hin jirre beekkamaadha. Saba ofbaree mirga isaaf falmatu Ajjeechaa fi hiraarriin akkaan yoo jabaatellee of booda deebisuu akka hin dandeenye seenaa biyyoota gabroomanii gabruummaa keessaa bahanii ilaaluun gahaadha. Kanaaf hireen Oromoon qabus wareegama barbaachisu kamuu kaffalee gabrummaatti xumura gochuudha. Daandiin Bilisummaatti nama geessu inni tokkichi tokkummaan ka’anii falmachuun gabrummaa ofirraa kaasuudha. Gabroomfataan salphaan biyya keenya deebisee nuuf kenna jennee eeguunis gowwummaa tahuu hubannee wareegama barbaachisuuf of qopheessinee lafee fi lubbuu keenyaan Bilisummaa fiduun dirqama ilmaan Oromoo xiqqaa guddaati.
Abbootiin keenya akkuma gabrummaa nu dhaalchisan nuti ilmaan keenya gabrummaa dhaalchisuu atuu hin taane harqoota gabrummaa dhaalle kana of irraa qaarisifnee ilmaan keenya bilisummaa dhaalchisuun dirqama dhaloota Qubeeti.
Keessattuu bara mootummaa Murna xiqqaa Wayyaanee daraaraa fi miidhaan nurra gahe kan kanaan dura mul’atee hin beekneedha. Ajjeefamneerra, qabeenyaa keenyas saamamneerra. Yerroo ammaa akka sabaatti Qaanii qaanii caalu keessa jirra. Qaanii kana keessaa kan bahuu danndeenyu yoo akka sabaatti tokkoomnee ilaalcha diinni addaan nu facaasuuuf nu gidduutti uume irra aanne qofa. Kanaaf keessaaf alaa Tokkuummaan ka’anii humnoomuun diinarra aanuun gaaffii yeroo hin barbaanneedha.
“Kaane haalollu Xiqqaa guddaan martii
Wareegamaan Bilisummaan Dhufti
Haga yom jiraannaa gabrummaa jalatti
Dhiigaaf lafee keenyaan Bilisoomu qabna nuti!”
Wayita biyya keenyaa fi mirga keenya falmachuuf kaanu miidhaa fi dararaan kanaan dura hin mul’anne nurratti raawwachuu mala. Wareegamni kamuu kan baafamu bilisummaa Biyyaaf waan taheef ajjeechaa fi dararaa soda of booda deebi’uun hin barbaachisu. Lafee keenya itti cabsinee, lubbuu keenya itti wareegnee harqoota gabrummaa of irraa mulquun Walabummaa fi Bilisummaa saba keenyaa fi biyya keenya Oromiyaa mirkaneessuu qabna.
Waluma galatti Nuti Ilmaan Oromoo “Bilisoomnee akka namaatti jiraachuu ykn Lafarraa dhabamuu” kaayyoo jedhu qabannee yoo kaane guyyaa bilisummaa keenyaa dhiheessuun ilmaan keenya gabrummaarraa bilisummaa dhaalchisuu akka dandeenyu shakkiin hin jiru. Kanaaf xiqqaa fi guddaan gabrummaa jalatti barabaraan jiraachuurraa wareegama hagamii baafnee bilisoomuun dirqama. Nuti gabrummaaf hin uumamne waan taheef.